Ihe kpatara azụmahịa gị kwesịrị iji jiri vidiyo na azụmaahịa | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 15, 2020 Saturday, January 23, 2021 Douglas Karr
Anyị emegola mbọ vidiyo anyị na Martech ma ọ dị mma… etinye aka na Youtube na mgbasa ozi mmekọrịta jiri 1 gaa 2 nkeji mkpachị ahia.
O di nwute, a ka nwere otutu myths n'ebe ahụ gbasara ego na mbọ achọrọ iji mepụta vidiyo nke gị maka mgbalị ire ahịa. Nke kachasị, ịchọghị ịrụ ọrụ na nsogbu teknụzụ niile - enwere nhọrọ dị egwu na-anabata vidiyo gị ugbu a.
Enweghi ike igosi vidiyo, ime ya ego zuru oke maka ụlọ ọrụ gị ebe ndị asọmpi gị anaghị enye ya ego mana ọ bụ na-akwalite njikọ dị ịtụnanya na ntụgharị stats. Igwe vidiyo vidiyo na-aga n'ihu na-eto dị ka ákwà ngebichi mara mma na bandwit na-enye ohere maka elele elere anya nke elekere. Video bụ ọbụna a na-akpali usoro mgbe ọ na-abịa emailNke anaghị akwado vidiyo mana enwere ike ịkwọ ụgbọala ọtụtụ ndị ọzọ.
Vidio bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji tinye ozi gị n'ihu ndị na-ege ntị. Na infographic a, hụ ihe kpatara vidiyo ji arụ ọrụ, yana otu ị ga-esi enweta ya na ahịa gị.
Ihe omuma ihe a na-akowa ihe kpatara gi usoro ahia ahia kwesiri iji vidiyo, ebe a ga-esi nweta echiche, usoro okike vidiyo, etu esi kesaa ya, ihe kacha arụ ọrụ, yana ụfọdụ ndụmọdụ ndị ọzọ.
Tags: usoro okike vidiyonkesa vidiyoechiche ahia vidiyovideo Atụmatụgịnị jiri vidiyogịnị mere ahịa vidiyo